Ahoana ny fomba fanaovana collage amin'ny sary | Creatives Online
Ahoana ny fomba fanaovana collage misy sary
Iray amin'ireo endrika mamorona sy mahafinaritra indrindra rehefa manana sary marobe ianao dia ny mamorona collage miaraka amin'izy ireo. Fomba iray handaminana ny sary amin'ny fomba mifanindry na mifandray izy ireo ka manome vokatra tsara kokoa. Fa, Ahoana no hanaovana collage misy sary?
Raha mbola tsy nanao na inona na inona ianao taloha ary tianao izany ankehitriny, raha tsy mahay an'izany ianao, na raha mila manao izany fotsiny ianao amin'ny asa iray, dia hanome anao vahaolana izahay mba hahazoana izany sy hanaovana izany amin'ny fomba matihanina indrindra azo atao. Andao hatao?
1 Inona no atao hoe collage
2 Ahoana ny fomba fanaovana collage misy sary raha tsy manana hevitra momba ny famolavolana ianao
3 Ahoana ny fomba hamoronana collage sary ho anao
4 Mamorona fanangonana sary miaraka amin'ny Google Photos
Inona no atao hoe collage
Ny collage dia azo faritana ho a fitambarana sary maneho zavatra mivaingana. Ohatra, azonao atao ny mieritreritra ny hisafidy sary maromaro ho an'ny zanakao ary hametraka azy ireo ho toy ny fivoaran'ny azy ireo. Mety ho collage izany, satria tsy mifantoka amin'ny sary iray fotsiny isika, fa misy maromaro miaraka ary mahatonga ny famolavolana ho manaitra kokoa, na dia mety ho sarotra kokoa aza ny hahatratrarana azy.
Ireo karazana tetikasa ireo dia atao amin'ny sehatra manokana sy matihanina, ary amin'ny maha-mpamorona sary na famoronana anao, dia tokony ho fantatrao ny fomba hiatrehana izany amin'ny asanao satria mety takian'ny orinasa izany, ohatra amin'ny tambajotra sosialy na ho an'ny ny pejy "momba anay", miresaka momba ny orinasa sy ny fivoarany, na ny momba ny mpiasa mihitsy.
Ahoana ny fomba fanaovana collage misy sary raha tsy manana hevitra momba ny famolavolana ianao
Mety ho mila manao collage tsara ianao satria te hanana sary mahatsikaiky, satria te hanome fanomezana ho an'ny olona iray ianao, na noho ny antony hafa. Na izany aza, tsy dia manana hevitra momba ny famolavolana ianao, na tsy hainao ny fomba fitantanana programa. Raha izany no mitranga, dia tsy tokony hanary ny hevitra, satria Amin'ny alàlan'ny Internet dia afaka mahita pejy maro ianao izay manampy anao hanao collage nefa tsy mila mahafantatra na inona na inona.
Raha ny marina, ny hany zavatra ilainao dia ny sary tianao hapetraka ary eritrereto ny endrika tianao. Avy eo dia mila misafidy fotsiny ny môdely hampiasaina ianao (izay hiankina amin'ny fizarana ny sary) ary avelao ny programa hanao ny majika mba hisintonana ny vokatra.
Ny sasany amin'ireo pejy azonao ampiasaina Ny fanaovana collage miaraka amin'ny sary dia:
Photojet. Tsy maintsy misafidy môdely fotsiny ianao ary mampiakatra ny sary mba hamolavola azy amin'ny tianao. Rehefa vita izany dia alainao ho sary ary dia izay.
Fotor. Amin'ity tranga ity dia hanana dingana efatra ianao, satria hamela anao hanova ny fiaviana, sisiny, vokatra, ampio sticker ary lahatsoratra mihitsy aza.
PicMonkey. Safidy iray hafa omenay anao, ary tena ilaina satria azonao atao ny manova azy toy ny tamin'ny teo aloha. Mazava ho azy fa manana andrana maimaim-poana izy io, ka aorian'izany dia tsy maintsy mandoa ianao.
Pixiz. Iray amin'ireo tianay indrindra izy io satria afaka manao sary môdely mifototra amin'ny isan'ny sary tianao ianao. Amin'ny fametrahana ny isan'ny sary ao amin'ny motera fikarohana dia mahazo môdely ho an'ireo sary manokana izay mitsitsy fotoana ianao. Ankoatra izany, manana safidy vitsivitsy ianao, na dia voafetra amin'ny isa sasany aza.
Ahoana ny fomba hamoronana collage sary ho anao
Tsy lazaina intsony fa, ankoatry ny fahafaha-manao omen'ny Internet anao miaraka amin'ny programa sy fampiharana, na maimaim-poana na karama, ho an'ny PC, solosaina findainao ary smartphone, dia manana fahafahana hamorona ny endrikao manokana ianao, tsy miankina amin'iza na iza. mamorona zavatra aotra. Tsy sarotra araka ny mety ho feo izany ary mila programa fanitsiana sary fotsiny ianao toa ny Photoshop, GIMP na mitovitovy (an-tserasera na napetraka amin'ny solosainao).
ny dingana tsy maintsy hataonao Ireto manaraka ireto:
Ataovy an-tanana ny sary rehetra tianao hapetraka ao anaty collage. Alohan'ny hanokafana azy ireo ao amin'ny programa dia manoro hevitra anao izahay hanokatra sary tsy misy dikany, izay ho vokatry ny collage anao.
Ny zavatra manaraka dia ny fanokafana ny sary. Azonao atao ny manokatra azy tsirairay ary mandika azy ireo ka mamorona sosona samihafa amin'ny sary tsy misy na inona na inona (mba hahafahana mamindra azy tsirairay ny tsirairay amin'izy ireo), na sokafy izy rehetra, ampidiro ary akatony ireo rakitra sary ireo.
Izao no fotoana hamoahana ny eritreritrao. Izany hoe; tsy maintsy manetsika ny sary ianao, apetraka eo ambonin'ny iray hafa (manova ny filaharan'ny sosona), ary avelao araka izay irinao izany.
Ho fanampin'izany dia azonao atao ny mampiditra lahatsoratra, sary hafa (toy ny stickers na emojis, sns.) na mametraka frame.
Farany dia tsy maintsy mitahiry ny famoronanao sy/na manonta azy fotsiny ianao.
Na dia toa tena mora aza ny dingana, ary mety hieritreritra ianao fa tsy mitovy izany any aoriana, dia efa nampitandrina anao izahay fa eny, mora izany. Marina izany Ny fotoana voalohany dia mety haharitra ela, fa raha manam-paharetana ianao dia hivoaka ary ny tsara indrindra dia ny zavatra noforoninao tamin'ny tsy misy.
Mamorona fanangonana sary miaraka amin'ny Google Photos
Raha tsy te-hiasa amin'ny programa ianao, na te-hametraka fampiharana, na mitsidika tranokala hampiantranoana ny sary aza satria tsy fantatrao izay azony atao amin'izy ireo any aoriana (izany no iray amin'ireo tsy fahampian'ny fampiasana ireo tranokala), avy eo, ny safidy azonao anontaniana dia Google Photos.
Raha tsy fantatrao, Ity fampiharana ity dia efa napetraka mialoha amin'ny telefaona Android rehetra, ka tena tsy mila mametraka zavatra mbola tsy tao amin'ny findainao ianao.
Raha ny marina dia fampiharana somary miafina amin'ny findainao izy io satria tsy ho hitanao amin'ny maso mitanjaka. Saingy misy izany. Hiseho miaraka amin'ny kisary misy kodiaran-droa izy io, ny loko tsirairay (mena, mavo, maitso ary manga, ny lokon'ny Google).
Tsy maintsy manindry azy fotsiny ianao dia hiditra ao amin'ny app. Omeo minitra vitsivitsy izy io mba hampidirana ny sary rehetra anananao ary rehefa hitanao fa vita izany dia mifidiana sary 9 samihafa avy amin'ny horonan-tsarinao.
Manaraka, mila manindry ny famantarana + ianao eo an-tampon'ny fampiharana. Haneho sakafo misy ny «Collage» izy io. Raha vantany vao omenao izany dia hatambatra ho azy miaraka amina frame fotsy ireo sary ireo.
Mazava ho azy, azonao ampiana lahatsoratra, sivana ... fa efa nampitandrina anao izahay fa tsy hamela anao hanova ny filaharan'ny sary. (Raha tianao dia tsy maintsy mamerina ny tenanao ianao ary manondro ny sary amin'ny filaharana marina tianao hiseho).
Araka ny hitanao dia manana safidy maro hanaovana collage misy sary ianao. Manoro hevitra hafa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny fomba fanaovana collage misy sary
Ahoana ny fomba hanaovana elanelam-potoana